ဖုကုအိုခ . ဟာခတ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan(2/3)
ဟခတသည် ကျုးချုးဒေသ၏ တရုတ်တန်း။ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ရာနေရာများ အားလုံးစုံလင်စွာရှိနေသော မြို့ ။ ဒဇိုင်းအိဖုမြို့ သည် နိုင်ငံ၏ အထူးသမိုင်းကြောင်းရှိသော ဒဇိုင်းအိအစိုးရ၊ ဒဇိုင်းအိဖု တန်းမန်းဂူး၊ စုအိရှိရောဆဲခိ စသောနေရာများရှိပြီး သမိုင်းကြောင်းများနှင့် ထိတွေ့ နိုင်သော လည်ပတ်ရာနေရာများအဖြစ် လူကြိုက်များပါသည်။ ရှေးကျပြီးခေတ်ဆန်သော ဆိပ်ကမ်းမြို့ အကောင်းအဆိုးများရှိနေသောခေတ်နှင့် မျက်မှောက်ခေတ်ကို ခံစားနိုင်သော မြို့ ကို လမ်းလျှောက်ရန်တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။
ဖုကုအိုခ . ဟာခတ၏လူကြိုက်များနေရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်လစဉ်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းဖြင့်စီသည်
အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ စီးပွားရေးကောင်းမွန်ခြင်းတွေ ရရှိစေတဲ့ ဟာခတရဲ့ အစောင့်အရှောက်အဖြစ် ( အိုခုရှိဒစံ ) လို့ ခေါ်တဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်မြို...
ယနဂဝသည် ပျမ်းမျှ ၄၁၀ နှစ်မတိုင်ခင် ယာနဂဝချော ချိခုဂျောအချိန်တွင် ဂျောကမချိကို ပုံဖော်ထားသည့်အတွက် ကျုံးများဖြင့် စနစ်တကျပြုလုပ်ထားသော ရေမ...
အိုအိုဝခဲခရိုင် ချူးစွတ်မြို့ ယာမကိုခုမချိ တွင် ရှိနေသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၁၂၀၀ မီတာတွင်ရှိသော ဟိကိုတောင်သည် ဂျပန်ရှု ခင်း၁၀၀ ထဲမှ တစ...
စုစုပေါင်းအရှည် ၅၀၇ မီတာ ဖြစ်ပြီး တံတားပလက်ဖောင်းရဲ့ အနက်က ၁၅ မီတာမှ ၁၈ မီတာရှိပါတယ်။ အာရိအာခဲပင်လယ်က ဒီရေအတတ်အကျက ပြင်းထန်တာကြောင့် ပင်လ...
ဖူရိုးဒခန်းဘဲအဲခါယူရိ ရဲ့ ဆာကူရာနာမည်ကြီးနေရာဖြစ်တယ်။ ခိုးရိုးခန် ၊ ဖူခုအိုခရဲတိုက် ၊ ဟဲဝဒိုင်းဘေ့ဘောကစားကွင်း စတဲ့ သမိုင်းဝင် တန်ဖိုးရှိ...
ဟွမ်းချူးနှင့် ကယူးချူးကြားတွင် တည်ရှိသော ပျမ်းမျှအကျယ် ၇၀၀ မီတာခန့် ရှိသော ပင်လယ်ရေလက်ကြား။ တစ်နေ့ တွင် သင်္ဘောအသေးအကြီး အစင်း ၇၀၀ ခန့် သွ...
ပူဇော်ပသသော ဘုရားကျောင်း၏ ပင်မဆောင်။ ခိချိဇနဲခိုး၏ အုတ်ဂူနေရာတွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ခိချိဇနဲခိုသည် သေပြီးနောက်ပိုင်း ကောင်ကင်နတ်ဘုရားအဖြစ...
၁၆၂၄ ခုနှစ်မှာ အာခိဇွတ်ခိကို ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ခူရိုးဒနာကအိုခိအကြီးအကဲက ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးယခင်က ဖခင် ခူရိုးဒနာဂမာ...
၊ အတွင်းမှာ ၂၂၆၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ရှိတဲ့ ရေကန်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ရေရှုခင်းပန်းခြံဖြစ်တယ်။ ရှေးတုန်းက ခုရ...
၁၉၈၉ခုနှစ်မှာ အာရှ ပစိဖိတ် ကုန်စည်ပြပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဖုခုအိုခတာဝါက အမြင့် ၂၃၄ မီတာရှိပြီး မှန်ချပ် ၈၀၀၀ ဖြင့် ဖုံးအုပ်...